Waxqabadka Waaxda Arrimaha Barakacayaasha Jannaayo-Juun 2017 – Waxqabadka Waaxda Arrimaha Barakacayaasha Jannaayo-Juun 2017 – Ministry of Interior, federal and democracy affairs
WAXQABADKA JAN-JUNE 2017: WAAXDA ARRIMAHA BARAKACAYAASHA
Waxaa diiwaangelin horaad (Pre-registration) lagu sameeyay barakacayaasha magaalada Bosaso; waxaa laga qoray 38 kaam, waxaa laga diiwaangeliyey dad gaaraya 68,750 qof, kuwaasoo lagu sameeyay kala hufid iyo kala saarid si loo helo tirada dhabta ee laga qaadayo diiwaangelinta faraha iyo indhaha, lana siinayo aqoonsiga barakacnimo.
18,770 oo kamid ah 68,750 barakacayaasha Bosaso ayaa lagu diiwaangeliyay System-ka Diiwaangelinta Wasaaradda, wxaana qof kasta laga qaaday macluumaadka shaqsiga oo dhameystiran, sawirka, indhaha iyo faraha. Qoys walba oo lagu diiwaangeliyey Systemka Barakacayaasha Dowladda waxa lasiiyey Shahaado Aqoonsi Barakacnimo.
Waxaa lasoo saaray warbixintii Diiwaangelintii iyo Xog Ururintii Garowe laga sameeyay sanadkii tegay ee 2016, taasoo loo soo bandhigay hey’adaha iyo dadweynaha.
Tirada kaamamka barakacayaasha Garowe ayaa noqday 17 kaam, kuwaasoo ay ku nool yihiin 4,262 qoys oo noqonaya 15, 583 qof; dadkaas 59% waa dumar 41% waa rag halka dadkaas guud ahaan 76% ay ka yar yihiin 30 sano. Warbixinta oo faahfaahsan waxaa laga soo rogan karaa halkaan: http://www.moipuntland.com/moi/wp-content/uploads/2017/05/KEY-FINDINGS-Garowe-IDPs-Registration-Profiling-2017.pdf
Waxaa si joogto ah loola socon jiray dhaqdhaaqa dadka reer guuraaga ah ee ay xooluhu kasoo dhamaadeen kuwaasoo kusoo xaroonaya magaalooyinka. 51,250 qof ayaan ku qiyaasnay inay kusoo biireen dadka barakacayaasha ee magaalooyinka laga soo bilaabo November 2016 ilaa April 2017, dadkaas waxay kasoo quusteen noloshoodii caadiga ahayd waxayna ku biireen kaamamka barakacayaasha, magaalooyinka Bosaso iyo Galkayo ayaa ah meelaha ugu badan ee ay dadkaasi kusoo xaroodeen. 15,920 oo kamid ah 51, 250 oo degan Gobollada Mudug, Nugaal, Sanaag iyo Bari waxaa loo bilaabay lacag deg-deg ah (Cash intervention) oo ah USD 140 qofkiiba, loona wadayo 2-3 billood.
9,200 oo kamid ah 51, 250 oo ku nool Galkacyo, Benderbayla, Iskushuban, Buraan, Dangorayo iyo goobo kale oo badan waxaa lasiiyey agabka muhiimka ah ee guriga (NFIs).
200 oo guri oo kasameysan alwaaxa adag iyo bulukeeti ayaa loo dhisay 200 oo qoys oo barakacayaal ah magaalada Galkacyo.
Dhammaan iskuulada barakacayasha waa lacag la’aan, waxaana 8,420 arday oo kasoo jeeda qoysas danyar ah magaalada Galkacyo ayaa lasiiyey agabka waxbrashada, iyadoo lagala kaashaday Wasaaradda Waxbarashada Dowladda Puntland.
80 baalle oo soolarka ku shaqeeya cadceeda ayaa laga hirgeliyay barakacayaasha Galkacyo si ammaanka kaamamka barakacayaasha kor loogu qaado.
420 dhalinyaro barakacayaasha ah magaalooyinka Galkacyo and Bosaso ayaa lasiiyey xirfadaha gacanta (Vocational skills), kuwaasoo markay dhammeysteen qaarkood lasiiyey agabkii shaqada iyo dhaqaale yar oo ay ku abuurtaan ganacsi.
Waxaa heshiisyada loo cusbooneysiiyey dhulalka ay degan yihiin dadka barakacayasha ee Bosaso kuwaasoo ay dhulka si kumeel gaar ah u siiyeen dadka deegaanka ah, waxaana Bosaso laga wadaa in dhul rasmi ah loo helo dadka barakacayaasha ah ilaa hadana dedaalkaasi wuxuu marayaa 8%.
Midowga Yurub ayaa EURO 5,000,000 ugu deeqday hirgelinta Istaratijiyada Isdhexgalka Barakacayaasha Puntland, iyadoo mashariicdaas laga fulinayo magaalooyinka Bosaso iyo Galkacyo, waxaana lacagtaas lagu bixinayaa waxbarashada, caafimaadka, xirfadaha iyo adeegyada kale si kor loogu qaado isdhexgalka barakacayaasha iyo dadka martigeliyey.
Xafiiska Waaxda Barakacayaasha
Golaha Deegaanka oo Doortay Duqa iyo Ku xigeenka Degmada Garowe
Next story Wasaaradda oo maalgelin ganacsi u sameysay 200 oo Yemeniyiin qaxooti ah
Previous story Waxqabadka Waaxda Arrimaha Qaxootiyada Jannaayo-Juun 2017